China Ceramic Wall Tiles Ezenziwe Ngesandla 6 × 6 ifektri abakhiqizi | YANJIN
Usayizi: I-6x6inch (15.2x15.2cm)
Isisindo: 0.31kg / pc
MOQ: I-480pcs / design
Iphakheji: 10pcs / foam ibhokisi, 120pcs / ibhokisi
Isisindo For One Carton: 39.6kg
Usayizi webhokisi: 64x38x39cm
Amathayili ethu odonga asebenzisa indlela ye-ceramic nomsebenzi wokuklama olethwe kusuka ku-zenith yamasiko ombuso waseChina, amathayili wobumba acwebezelwe afakwa emisebenzini yobuciko eyenziwe ngokwezifiso.
Amathayili odonga manje asetshenziswa kabanzi ezindaweni eziningi, njengendawo yokubasa umlilo, indlu yokugezela, ikhishi, i-swimming pool kanye negumbi lokuhlala. Ziyisihlobiso esihle sobuciko ekhaya lakho nasehhovisi.
Ngenxa yendalo yabo yokudweba, akuyona into engavamile ukuthola amaphutha ngezikhathi ezithile, ukuqhekeka, noma ukwehluka komthunzi ngaphakathi kwethayela. Lokhu kwehlukahluka kubhekwa njengesici esifiselekayo kumkhiqizo.
Ukungeza ubukhazikhazi nobuhle ekhishini, emabhafini, emashaweni, eziqongweni zokuphikisa ngamathayili ethu enziwe ngezandla, ukuhlobisa impilo yakho.
Labo abafuna ukubukeka okuhlukile kweKhaya labo noma iBhizinisi labo, nalabo abanokwazisa ngobuhlakani nemininingwane emihle enganikezwa ngumculi we-Custom Tile onekhono kuphela, bazothola ukwaneliseka okungenakuqhathaniswa nenjabulo enganikezwa kuphela amathayela wesiko opendwe ngesandla.
(1) Umklamo ohlukile wethayela elenziwe ngezandla, njengezwe, eningizimu-ntshonalanga, zakudala, ezothando, iVictorian, i-oceanic, izilwane, izinyoni, izimbali, amakhambi, njll. Futhi singenza futhi siklame ngokuya ngomdwebo nesicelo sakho.
(2) Konke kupendwe ngesandla ngabasebenzi bethu abangochwepheshe.
(3) Imibala ehlukahlukene nokuklanywa, izici ezinhle nezimelene nokungcola.
(4) Ukusetshenziswa: Fanela noma yikuphi ukuhlobisa kwangaphakathi kwazo zonke izinhlobo zezindawo. Gqamisa ubuntu.
(5) Ubukhulu: 7-8mm
(6) kulula ukuwasha nokugcina
(7) Kuxoshwe ekushiseni okuphezulu
(8) Izinto zokudweba ezinobungani bemvelo
2) Imigomo Yokukhokha: 30-100% idiphozi, TT, West Union, Irrevocable L / C.
5) Usuku lokulethwa: izinsuku ezingama-20-35 ngemuva kokuqinisekisa i-oda.
Sine imiklamo may for inkomba yakho.
Amanye amaphethini wamathayili aboniswe esithombeni mhlawumbe angashintsha, ngenxa yokushintshashintsha kwesitoko.
Uma ufuna iphethini ethile noma umbala wombala oqinile, sicela uxhumane nathi.
Langaphambilini Idizayini edume ngamathayili we-Ceramic Relief High - I-Fridge Magnet - Yanjin
Olandelayo: Ceramic okuhlobisa Tiles Border
Izinombolo Zokwakha Ezenziwe Ngesandla Ezenziwe Ngesandla Ezenziwe Ngesandla se-Ceramic Tile Wall Decor
I-Ceramic Wall Tile eyenziwe ngezandla